DOWNLOAD STAIRDESIGNER N'EFU NA KỌMPUTA GỊ - MMEMME NYOCHA - 2019
Ọ bụrụ na e debere teepu gị na akwụkwọ ndị na-enweghị isi ma ọ bụ na ịchọghị ịhụ otu onye ma ọ bụ ọtụtụ ndị enyi na listi gị, ị nwere ike wepu aha ha ma ọ bụ wepu ha na listi gị. Ị nwere ike ime ya nke ọma na ibe gị. E nwere ọtụtụ ụzọ ga-esi baara gị uru na usoro a. Onye ọ bụla n'ime ha dị mma maka ọnọdụ dị iche iche.
Anyị na-ewepụ onye ọrụ site na ndị enyi
Ọ bụrụ na ịchọghị ịhụ onye ọrụ ụfọdụ na listi gị, ịnwere ike ihichapụ ya. A na-eme nke a n'ụzọ dị nnọọ mfe, na ntinye ole na ole:
Gaa na ibe gị ebe ịchọrọ ịme usoro a.
Jiri nyocha nke saịtị iji chọta onye ọrụ achọrọ. Biko mara na ọ bụrụ na ọ nọ na ndị enyi gị, mgbe ị na-achọgharị akara ahụ, a ga-egosi ya n'ọnọdụ mbụ.
Gaa na ibe onye enyi gị, a ga-enwe kọlụm na nri ebe ịchọrọ ịmepe ndepụta ahụ, mgbe nke a gasịrị ị nwere ike wepu onye a na listi gị.
Ugbu a, ị gaghị ahụ onye ọrụ a dịka enyi gị, ị gaghị ahụ ya na mbipụta gị n'akwụkwọ akụkọ. Otú ọ dị, onye a ka ga-enwe ike ile ibe gị anya. Ọ bụrụ na ịchọrọ igbochi ya, ị ga-egbochi ya.
Wepu aha gị n'aka enyi
Usoro a bara uru maka ndị na-achọghị ịhụ akwụkwọ enyi ya na akụkọ ya. Ị nwere ike ịmachi ọdịdị gị na ibe gị ma wepụ onye si na listi gị. Iji mee nke a, ị ghaghị ịdebanye aha na ya.
Gaa na nkeonwe nkeonwe gị, mgbe ahụ na nchọta na Facebook ịchọrọ ịchọta mmadụ, dị ka akọwara n'elu. Gaa na profaịlụ ya na n'aka nri ị ga-ahụ taabụ "A debanyere gị". Gwa ya ka ị mepee menu ebe ị chọrọ ịhọrọ "Wepu aha na mmelite".
Ugbu a, ị gaghị ahụ mmelite nke onye a na ndepụta gị, Otú ọ dị, ọ ka ga-adị na ndị enyi gị ma nwee ike ịza ajụjụ na posts gị, lee ibe gị ma deere gị ozi.
Wepu aha na otutu mmadu n'otu oge.
Ka e were ya na ị nwere ụfọdụ ndị enyi na-ekwukarị isiokwu na-adịghị amasị gị. Ị gaghị achọ ịgbaso nke a, n'ihi ya i nwere ike iji uka wepu aha. Emere nke a dika nka:
Na ibe gị, pịa akụ na nri nke menu enyemaka ngwa ngwa. Na ndepụta nke mepee, họrọ ihe ahụ "Ntọala Ntanetị Ozi".
Ugbu a ị na-ahụ n'ihu gị nhazi ọhụrụ ebe ịkwesịrị ịhọrọ ihe ahụ "Wepu aha ndị mmadụ ka ha zoo ihe ha dere". Pịa ya ka ịmalite ntụgharị.
Ugbu a, ị nwere ike ịchecha ndị enyi niile ịchọrọ ịwepụ aha, wee pịa "Emere", iji gosi ihe omume gị.
Nke a mejupụtara usoro ndebanye aha, ọtụtụ akwụkwọ ndị na-adịghị mkpa ga-apụta na ndepụta ozi gị.
Nyefee enyi gị na ndepụta enyi gị
Ndepụta nke ndị mmadụ, dị ka ndị maara, dị na netwọk mmekọrịta Facebook ebe ị nwere ike ịnyefe enyi ahọrọ. Nkọwapụta na ndepụta a pụtara na ọ dị mkpa ịkwalite mbipụta ya na ndepụta gị ruo na nke kachasị nta ma nwee nnukwu ihe ịga nke ọma na ị gaghị achọpụta akwụkwọ ndị enyi a na ibe gị. Ngbanwe na ọnọdụ enyi bụ dị ka ndị a:
Kwa otu, gaa na nkeonwe gi, ebe ịchọrọ ime ebe a. Jiri nyocha Facebook ka ngwa ngwa chọta enyi dị mkpa, wee gaa na ibe ya.
Chọta akara ngosi achọrọ n'aka nri nke avatar, megharia ya na kọntaktị iji mepee menu ntọala Họrọ ihe "Ndị enyi"ịnyefe enyi na ndepụta a.
Na ọnọdụ a ezuchara, n'oge ọ bụla, ịnwere ike ịnyefe onye ọzọ na ọnọdụ enyi ma ọ bụ, ọzọ, wepụ ya site na ndị enyi gị.
Nke ahụ bụ ihe niile ịchọrọ ịma banyere iwepụ ndị enyi gị ma wepụ ya na ha. Biko rịba ama na n'oge ọ bụla, ị nwere ike ịdenye aha onye ọzọ, ma, ọ bụrụ na ndị enyi ya ewepụrụ ya, mgbe ị tụghakwara ya ọzọ, ọ ga-anọ na ndepụta gị mgbe ọ kwadoro arịrịọ gị.